#Maxaa Farmaajo ka Hortagan Ka Qeyb Galka shirka UN-ka Talo Ma Baasaboorka Mareykanka ? - Get Latest News From Horn of Africa
#Maxaa Farmaajo ka Hortagan Ka Qeyb Galka shirka UN-ka Talo Ma Baasaboorka Mareykanka ?
Digniinta oo ah mid shuruucda dalkaas lagu caddeynayo ayaa lagu sheegay inay dhici karto in qofkaas uu lumiyo dhalashada Mareykanka, haddii uu u tartamo xil, loona dhaariyo, taasi oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in aysan waafaqsaneyn shuruucda dalkeeda.193782
”In madaxweynaha uu shirka ka baaqdo qasab ma ahan inay sabab yeelato, laakin waxay noqon kartaa inuu arrimo ka muhiimsan tagitaankiisa New York waqtigan la joogo ay jiraan, marka in la’is weydiiyo oo lala yaabo ma’aha. Madaxweynaha ayaa qiimeeya sida ay u kala horreeyaan, una kala muhiimsan yihiin howlaha uu qabanaayo, waana dhaqan adduunka ka jira, wax Soomaaliya kaliya u gaar ah ma aha” ayuu yiri wasiirka arimaha dibada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
”Walow aanan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysa in madaxweynaha uusan aadin shirkaasi muhiimka ah marki labaad, waxaan garaneynin in madaxweynahu ay ka tahay biseyl odaynimo iyo in ay ka tahay quud-darreyn uu quud-darreynaayo dhalashadiisa mareykanka.”
”In madaxweynaha uu waayay wax uu la hor tago shirka, maadaama amniga dalka aan horumar laga samaynin, dowlad goboleedyadana ay is khilaafsan yihiin. Waxaa laga yabaa in uu is leeyahay tan xalli, ka dibna shirarka xiga ee Qaramada Midoobay ka qeyb qaado, adigoo haysta wax cad oo muuqda. Waxaa kale oo suurta gal in uusan dooneynin inuu wareejiyo baasaboorkiisa Mareykanka madaama waqti yar ay u hartay uusanna hubin in uu mar labaad soo laaban doono iyo in kale.” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
”Farmaajo madaxweyne Mareykan ma aha, waa madaxweynaha Soomaaliyeed. Xeel dheerayaasha sheegaaya in labo madaxweyne oo Mareykan aysan hal mar wada joogi karin Mareykanka waa kuwa aan aad u xeeldheereyn, madaxweynuhu waa uu imaan karaa Mareykanka laakiin go’aanka isaga ayaa iska leh, mana haboonna in la yiraahdo maxaad u tagi waysay.”